Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo la Wareegay Gacan ku haynta Degaanka Bariire – Balcad.com Teyteyleey
Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo la Wareegay Gacan ku haynta Degaanka Bariire
Wararka naga soo gaaraya Degaanka Bariire ee Gobolka Shabellaha Hoose oo ayaa sheegay in saakay Waabarigii Weerar ku qaadeen Dagaalyahanada Al-Shabaab oo iyagu durbadiiba la wareegay gacan ku haynta deegaanlkaasi.
Idaacadda Andulus oo ku hadasha Afka Al-Shabaab ayaa faafisay in Ciidamada Dowladda Soomaaliya laga qabsaday Degaanka Bariire,waxaana halkaa la wareegay Al-Shabaab kadib Dagaal halkaasi ka dhacay.
Dagaalkaasi ayaa labada dhinac waxaa ka soo gaaray khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac intaba leh, Dagaalka Saakay ka dhacay Degaanka Bariire ee Gobolka Sh/Hoose ayaa ahaa mid hub culus la isku adeegsaday.
Wararku waxay sheegayaan in Dagaalka uu bilowday kadib markii shalay Degaanka Bariire ay ka baxeen Ciidamada AMISOM iyo Saraakiil Caddaan ah,waxaana Magaalada ku haray Ciidamada Milatariga Soomaaliya.
Dhanka kale Al-Shabaab ayaa ku faantay inay Hub iyo Gaadiid Dagaal ay ku Furteen Weerarkii Cuslaa ee ka dhacay Bariire, hase yeeshee ma jirto cid xaqiijinaysa sheegashada kooxda Shabaabka.
The post Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo la Wareegay Gacan ku haynta Degaanka Bariire appeared first on Ilwareed Online.
Suldan Qaamuus “Galmudug haday dunto Federaalkana waa La duminayaa…”